ကိုယ်အလေးချိန်တိုင်းတာရာတွင် ၀.၁ကီလိုဂရမ်သာ အလေးချိန်တိုးသော်လည်း စက်မှလျင်မြန်စွာသိရှိနိုင်ခြင်း သတ်မှတ်ချက်များ • လွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်ချက်၊ ညင်သာစွာထိရုံဖြင့်ပါဝါပွင့်ခြင်း • ပါးလွှာဆန်းသစ်ပြီး ချောမွတ်ပြောင်လက်သောဒီဇိုင်း • ငွေရောင်အရည်အသွေးမြင့်မှန် • တိကျသောအဖြေအတွက် အာရုံခံကိရိယာ(၄)ခုတပ်ဆင်ထားခြင်း • ကြီးမားသော LCD မျက်နှာပြင် • ကိုယ်အလေးချိန်တိုင်းတာရာတွင် ၀.၁ကီလိုဂရမ်သာအလေးချိန်တိုးသော်လည်း စက်မှလျှင်မြန်စွာသိရှိနိုင်ခြင်း • ကိုယ်အလေးချိန် ၁၅၀ကီလိုဂရမ်ထိတိုင်းတာနိုင်ခြင်း
Omron ကူရှင်အကြောပြေနှိပ်စက် HM-340 က သင့်လည်ပင်း၊ ပခုံးနှင့် နောက်ကျောများ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကို ကုသရန်အတွက် လွယ်ကူစေသောနည်းလမ်းကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမွန်စေရန်လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းကုသရန် နှင့် ကိုယ်အင်္ဂါပြန်လည်သန်စွမ်းရေးလေ့ကျင့်ခန်းများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ကူရှင်အကြောပြေနှိပ်စက်အသုံးပြုနည်းပုံစံများ - နှိပ်သည့်ကြာမြင့်ချိန် : ခန့်မှန်းခြေ(၁၅)မိနစ် တစ်မိနစ်အတွင်းနှိပ်နယ်ပေးသည့်နှုန်း : ခန့်မှန်းခြေတစ်မိနစ်လျှင်အကြိမ် (၃၀) အပူလုံး၏အမြင့်ဆုံးအပူချိန် : ၅၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
X5 Slimming Effect ( Body အဆီချ ခါးပတ် တုန်စက် )
– လက်မောင်းလေးအဆီကျချင်တာလား – ဗိုက်ခေါက်လေးအဆီကျချင်တာလား, – Koreaလေးတွေလို ပေါင်တံသွယ်သွယ်လေးတွေ ဖြစ်ချင် တာလား? – ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကျောအလှကို အဆီ မရှိပဲstyleကျကျ လှချင်တာလား? ဆေးထိုးဆေးသောက်ရ မှာလဲကြောက် လေ့ကျင့်ခန်း centre တွေမှာလဲ လေ့ကျင့်ခန်းအချိန်ပေးပြီးမလုပ်နိုင် ,သွားလုပ် ဖို့ လဲ အချိန် မရ တဲ့ ဦးဦး/ ဒေါ်ဒေါ်/ ကိုက/ိုမမ/ ညီ/ ညီမလေး တို့အတွက် ဒီစက်ကလေးတစ်လုံးရှိရုံနဲ့တင် အဆင်ပြေပါပြီနော်… အိမ်မှာပဲ လေ့ကျင့် ခန်း လဲ ထ လုပ်စရာမလို ဘာအစားသောက်မှလဲပျက်စရာမလို ပဲ Tvကြည့်ေ နရင်းဖြစ်ဖြစ် ရုံးအလုပ်လုပ် ရင်းနဲ့တောင် ဒါလေးကို ကိုယ်ဖြစ်ချင် တဲ့ အဆီကျ စေ ချင် တဲ့နေရာမှာပတ် ထားလိုက်ရုံ ပါပဲ ရှင့် ! –နောက်ကျောဘက်,လက်မောင်း,လက်ကောက်ဝတ်,ပေါင်,ခြေထောက်နဲ့မိမိက မလို အပ်သော နေရာမှာရှိတဲ့အဆီပိုတွေကို ၁၅ မိနစ်လောက်ပတ် ထားရုံနဲ့ ချွေးတပြိူက်ပြိူက် စို့ လာ တာပါ,၂ ပတ်တွင်းဗိုက်ကလေးချပ်သွားတယ်နော်… – သွေးလည်ပတ်မှူအားကောင်းစေတယ်,သွေးကြောထဲရှိအဆီပိုတွေကို လျော့ကျ စေတယ် ဆိုတော့ တစ်ကယ်ကို ကောင်းမွန်ပြီး ဆောင်ထားသင့် ပါတယ် အမြန်ဆုံး မှာယူလိုက်ကြပါတော့ နော်…. ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 09784419691 09961127000 ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
နှလုံး၊ပန်းနာ၊ရင်ကျပ်ကြောင့် အသက်ရှုမ၀သူများ၊မောပန်းသူများ အဓိကထားအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။အပြင်သွားလာသောအခါတွင်လည်း အိတ်ဆောင်အဖြစ် သက်တောင့်သက်သာစွာ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပါသည်။ဝယ်ယူအားပေးလိုသော လူကြီးမင်းများအနေဖြင့် ကျွန်တော်များ Beurer Myanmar Co.,Ltd တွင် ချိုသာသောဈေးနှုန်းဖြင့် လက်လီလက်ကား ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
Includes isolating mask, response key, training cards, and instructions. 13 offset pages for easy flipping. 12.7 cm x 12.7 cm
The Crowded Symbol Book is designed for testing children and adults who have difficulty in reading the optotypes on the big charts. Includes response key, training cards, and instruction. 16 offset pages. 12.7 cm x 12.7 cm
LEA Symbols Near Vision Card with 40 cm Cord. Proportinally spaced (logMAR) lines on one side. Response key printed on test card. Includes training cards and instructions.
LEA Symbols &amp; LEA Numbers Near Vision Card
Combination LEA Symbols &amp; LEA Numbers Near Card with 40 cm Cord. Response key printed on test card. Flash cards and instructions included. 20.3 cm x 25.4 cm
Standard order LEA Symbols low contrast handheld flip chart Test includesatable for conversion to Snellen equivalent VA values,aresponse key, Training cards, recording forms and instructions.6pages, 8.25 cm x 22.9 cm
LEA Symbols Near Vision Playing Cards The four packs contain 16 cards each with symbols of varying sizes. Includes training cards and instructions. The paper cards measure4cm7cm
Infrared Thermometer Ear (1 sec )
- 1 Second Time Response in ear use ( နားတွင်းအပူချိန်ကို တစ်စက္က္ကန့် အတွင်း တိုင်းတာနိုင်ခြင်း) - Beeper/ Fever Alarm (အဖျားရှိလျှင် အသံပေးစနစ်ပါခြင်း) -ံC/ံF ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း - Low Battery Indication ပြခြင်း - Memory များကို မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခြင်း - Auto Power Off ပါသောကြောင့် Power Saving ဖြစ်ပါသည်။ -ကြည်လင်ပြတ်သားသော Display ပါရှိခြင်း။ - Power Saving ပါရှိခြင်း။
Neck Massager Brace
ကျီးပေါင်း တက်တတ်သူများအတွက်၊ ဇက်နာသူများအတွက် Neck Massager Brace လေးကို Rocketတွင် မှာယူလိုက်ပါ။ ပတ်ထားပါက လည်ပင်းတစ်ဝိုက် ပူလာမည်ဖြစ်ပြီး နာကျင်မှု၊ ညောင်းညာမှုကို သက်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်​ခါဝတ်​ရင်​ ၅မိနစ်​သာ ဝတ်​​ပေးပါ။ ​နောက်​ပိုင်း အပူခံနိုင်​လာရင်​ အချိန်​ ထပ်​တိုးဝတ်​လို့ ရပါတယ်​။ မှတ်​ချက်​ - တစ်​​နေ့လုံး ဝတ်​လို့ မရပါ။ ဝတ်​ရတာ အဆင်​မ​ပြေပါက ဆရာဝန်​နဲ့ တိုင်​ပင်​ပြီးမှ ဆက်​ဝတ်​ပါ။ ဈေးနှုန်း - 15000 kyats Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...